Izikhube yona iCity isiyophuma namaphuzu aphelele kwiBaroka qede kwasala amabili - Impempe
Izikhube yona iCity isiyophuma namaphuzu aphelele kwiBaroka qede kwasala amabili
January 31, 2021 January 31, 2021 Impempe.com
UMpho Makola weCape Town City obe nguMdlali oVelele bebhekene neBaroka ngeSonto
Usale enwaya ikhanda ekhala ngenhlanhla ebalahlile umqeqeshi weCape Town City, uJan Olde Riekerink ngemuva kokuthi ezakhe sishaye igoli ngakubo ukusiza iBaroka ibambambe ngo 1-1 emdlalweni weDStv Premiership obusePeter Mokaba Stadium ngeSonto.
Lo mqeqeshi waseNetherlands uthi iBakgaga ayizange nje nakanye ike ikhahlele ibhola elibheke ngasemapalini abo kusuka umdlalo uqala waze waphela kodwa bafulathelwa elakubo, bayikorela bona.
ICitizens ilishaye zibuya nje ekhefini igoli layo, futhi bekufanele iwathole namanye kodwa yabhacaza, ihlulwa amathuba. Bekungumzuzu ka-49 ngesikhathi uMduduzi Mdantsane ebeka elihle ibhola phambi kukaBradley Ralani, naye akangabe esananaza, walibasela enethini.
Nokho kuthe ngomzuzu ka-77, uTerrence Mashego wazithola eselishaya ngakubo igoli kwaba ngu 1-1.
“Ngicabanga ukuthi besizimisele kakhulu, uma ubhekene neBaroka kumele uqine ngoba inabadlali abaqatha ngomzimba. Kumele ngibancome abadlali bami, sibe nebhadi nje ukuthi sigcine sidlale ngokulingana,” kusho uRiererink ngemuva komdlalo.
“Sibahlulile ngomdlalo. Into esingazisola ngayo wukuthi siyeke amathuba amaningi okushaya amagoli,” kuqhuba lo mqeqeshi.
Lo mphumela uyibambezelile iCitizens ebisishoshela isondela emaqenjini aphezulu kwilogi. Isahlezi endaweni seyihlanu namaphuzu angu-23 ngemuva kwemidlalo engu-14.
“Ngicabanga ukuthi ngaphezu kwakho konke, namuhla silahlekelwe amaphuzu amabili. Siwuqale kahle umdlalo. Yithi ebesiwuphethe kodwa besingebukhali kahle phambi kwamapali.
“Siwakhile amathuba kodwa asihlula – nokho akulula ukugqekeza iqembu elifana neBaroka ngoba bahlala babe baningi emuva. Esiwombeni sesibili sizamile futhi, sakwazi ukusheshe sishaye igoli elisenze sakhululeka.
“Bona abazange nakanye bake bakhahlele bebhekise emapalini ethu, kodwa ngebhadi sabakorela thina. Nokho besingalithola elinye emizuzwini eyishumi yokugcina ngoba amathuba wona besiwakha,” kusho uRiererink.
Previous Previous post: Izidlulele kalula iSundowns kwiChippa, ivula igebe lamaphuzu amahlanu
Next Next post: Yenyukele endaweni yesibili iRichards Bay ngemuva kokunenebula iChiefs